Alarm Lock အား ကမာရွတ် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
အိမ်၊ စက်ဘီးနဲ. ဆိုင်ကယ်တွေမှာ အသုံးပြုဖို. သင့်တော်ပါတယ်။
၃၅ စက္ကနါ်.လောက် စောင့်ပေးပါ။
Alarm Lock က ထိတာနဲ. ထမြည်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သော့ အပေါက်ကို တခြား သော့နဲ. ထိုးတာနဲ.လည်း ထမြည်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စက်ဘီးကို ခဏ တဖြုတ် ထားခဲ့သူတွေ၊
သူခိုး အန္တရာယ်ကို တတ်နိုင်သမျှ ကာကွယ်လိုသူတို.အတွက်
ဈေးနှုန်း – 12000 kyats (အသေး)
အမည်: Alarm Lock